Ny tongolobe mahafinaritra sy malefaka dia tanjin'ny ankizivavy maro izay manapa-kevitra ny hilalao fanatanjahan-tena. Misy karazana fampiasana azo ekena ho an'ny fianarana any an-trano sy any amin'ny efitrano. Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hananganana tovovavy iray, satria ny fandinihana ireo fitsipika fototra amin'ny fampiofanana dia mety hahomby amin'ny vokatra tsara. Zava-dehibe ny milaza fa tsy mila milalao fanatanjahantena fotsiny ianao, fa mihinana tsara.
Vetivety dia manofahofa ny tongotry ny ankizivavy iray?
Tsy maninona raha manofana ao an-trano ianao na ao amin'ny toeram-pisakafoanana, tsara kokoa ny manome ny safidy fototra amin'ny fampiasana entana ho an'ny hozatra maro. Fihetseham-pihariana samihafa manampy amin'ny fandoroana kaloria fanampiny. Ho fanazavana bebe kokoa ny fanampiana ny fanampiana, dia ilaina ny mameno ny fampiofanana sy ny fisorohana. Ny safidy tsara indrindra ho an'ny lesona: fampiharana fototra telo sy roa.
Maro no matoky fa tokony hampihatra matetika araka izay tratra ianao, saingy tsy mihatra amin'ny fampiofanana ny tongotra izany, satria efa ampy ny hozak'ity faritra ity ary mila 96 ora vao tafarina. Izany no antony itoriana ny fampiharana isaky ny 5 andro, fa tokony hampatanjaka ny fampiofanana. Raha miresaka momba ny fomba famolahana ny tongotry ny tovovavy any an-trano na ao an-dalamby, dia tsara ny milaza fa ny tongotra dia ampiasaina amin'ny enta-mavesatra, ka mila manova matetika ny fampiharana na ny fiasan'ny asa, ka hampitombo ny isan'ireo famerimberenana.
Mila manao fampiharana amin'ny fomba maro ianao, ary tokony horaisina ny isian'ny fiverimberenam-pahefana amin'ny fomba toy izany ka ny fahataperan'ny fe-potoana 2-3 dia natao tamin'ny hery farany. Aza ampiasaina mihoatra ny adiny iray, satria mitarika ho amin'ny famotehana ny tazomoka izany. Fomba fanaovan-tsoa tokony hotsarainareo: squaddons, lunges, press press, deadlifts, mahi isan-karazany, ary fampahalalana sy fiompiana.
Maro koa no liana amin'ny lohahevitra, satria ny habetsahanao dia afaka manongotra ny tongotry ny tovovavy iray, hany ka miankina amin'ny fomba fiasa tsirairay ny zava-drehetra. Raha manaraka ny fitsipika ianao dia hahita vokatra tsara ao anatin'ny roa volana.
Gymnastics ho an'ny fiterahana
Mandeha eo amin'ny kibony
Fanatanjahantena ho an'ny tratra miaraka amin'ny lavadrano
Fanatanjahantena ho an'ny gazety amin'ny fitball
Manao ahoana marina ny manao lalitra amin'ny tongotra?
Ahoana ny fananganana ny rambony ao an-trano?
Cardio ho an'ny fahavoazana
Ny endrik'i Emma Watson
Krovinochka indraindray: rafitra izay hanohina anao amin'ny ranomaso!
Afenina amin'ny voninkazo ao anaty trano
Ahoana ny famitana haingana ny tulle ao an-trano?
Tracksuits - ireo modely marika modely ary tsy vitan'ny hoe!
Oral dermatitis - fitsaboana
Ny aretiotaitra amin'ny aretiota - ny soritr'aretina sy ny fitsaboana
Torkia - sakafo mahandro
Fanosorana YM BC ho an'ny saka avy amin'ny lichen
Fangatahana trondro - fifantenana sarin'ireo sary malaza indrindra
25 ny olona, ​​ny fahalemen'izy ireo dia maherin'ny ampahany!